Akụkọ - Ihe dị iche na nhịahụ dị nro na nro nke isi ezé
Jiri ya tụnyereeji brọsh ịsa ezé eme ka brọsh ịsa ezé ndị dị nro adịghị emerụ ezé ahụ́ ma nweta ihu ọma nke ọtụtụ ndị na-azụ ha. Ka anyị lerukwuo anya n’ihe dị iche na ncha ezé na nke siri ike, na otu esi eji brọsh ịsa ezé.
Kedu ihe dị iche na nha nro nro na ezé ezé siri ike
1. Ihe dị iche na nro nro nro na ezé ezé siri ike
Ihe kachasị dị iche na nchara nro na nro siri ike bụ ụdị nke bristles. Brọsh ezé siri ike bristled nwere ike imebi enamel n’elu ezé n’ụzọ dị mfe. Na mgbakwunye, ntakịrị akpachapụghị anya nwekwara ike imebi goms. Imirikiti ndị mmadụ chọrọ naanị ịzụta nro nro. Mana iji wepu unyi site na ezé, nsonaazụ ya bụ otu ma ị na-eji brọsh ihicha siri ike ma ọ bụ nke dị nro. Ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ete ezé bụ ịsacha ezé gị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Na mgbakwunye, ma ọ bụ nha nro ma ọ bụ nke siri ike, sachaa ezé ahụ nke ọma mgbe ọ bụla ejiri ya, ma kpochapụ mmiri ahụ ka o kwere mee iji mee ka ọ kpọọ ma dị ọcha.
2. Otu esi eji ehicha akwa nro
1. A ga-etinye bristles bristles na nrịgo nke ogo 45 na elu nke ezé, tinye ya na diagonally ma jiri nwayọọ pịa ya na nkwụsị nke ọnụ eze na chịngọm, jiri ahịhịa na-agagharị na ezé dị n'etiti, ma jiri nwayọọ gbanwee bristles ahụ.
2. Ejila oke ike mgbe ị na-ehichapụ ezé. Na-asa ahịhịa site n’elu ruo n’ala mgbe ị na-ete ezé nke elu ya nakwa site n’ala ruo n’elu mgbe ị na-asa ezé nke ala. Ghaa ihu na azụ, hichaa ya na n’ime.
3. must ga-asacha ezé ma sachaa ọnụ gị n’ụtụtụ na n’anyasị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, hichaa ezé gị ozugbo ị risịrị nri ọ bụla. Ọ kacha mkpa ịsacha ezé tupu ị lakpuo ụra. Ghichaa ezé gị ihe na-erughị minit atọ n’oge ọ bụla.
4. Họrọ ahịhịa ezé kwesịrị ekwesị. Ihe ntaneti a kwesiri ibu ntacha eze na-eme nlekọta ahụike. Akpụkpọ ahụ kwesịrị ịdị nro, elu ahịhịa ahụ dị larịị, isi ahịhịa ahụ dị obere, achịcha ahụ dịkwa okirikiri. Kinddị ihe ntaneti a nwere ike iwepu ihe edetu na-enweghị emebi ezé na chịngọm.
5. Mgbe ị na-ehicha nke ọ bụla, saa asacha ezé ahụ, tinye isi ncha ahụ n'ime iko ahụ, tinye ya na ebe ikuku na nkụ. A ga-edochi ezé ọhụrụ ọ bụla n'ime ọnwa 1 ruo 3. Ọ bụrụ na bristles gbasasịa ma kpudo, a ga-edochi ya n'oge.